कतारको एक सफल व्यवसायिक जोडीको कारोबार अबौंमा, नेपालमा तारे होटलमा लगानी गर्दै:: Naya Nepal
कतार । कतारमा व्यवसायिक सफलता पाउने थुप्रै नेपालीमध्ये विकास प्रसाईं र अनु भट्टराईको जोडी पनि एक हो । कतारमा निर्माणदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विकास र अनुले भैरहवामा तीन तारे होटल निर्माणको गरेका छन् । नेपाली कामदारहरुलाई लक्षित गर्दै कतारदेखि अन्य खाडी मुलुकहरुमा पोलिक्लिनिक खोल्ने तयारीमा जुटेको यो जोडी कतारमा खासै चर्चामा नआइकन नै बार्षिक अबौं रुपियाँको कारोबार गर्न सफलता हासिल गरेको छ । विकास र अनुसँग गरिएको कुराकानीको केही अंशः
कुन कुन क्षेत्रमा तपाईंको लगानी छ ?
विकासः मैले खाल काम गरेको क्षेत्र भनेको कन्ष्ट्रक्शन (निर्माण) हो । मेरो चारवटा कन्ष्ट्रक्शन कम्पनी छ । दुईवटा व्यूटी पार्लर । एउटा रेष्टुरेन्ट । एउटा सुपरमार्केट । अब हामीले नेपाली कामदारहरुको हितको लागि भनेर पोलिक्लिनिक एक–डेढ महिनामा सुरु गर्दैछौं । सबैको छुट्टा छुट्टै अडिट (लेखापरीक्षण) हुन्छ । कन्ष्ट्रक्शनमा मात्रै हाम्रो महिनाकै आठ मिलियन कतारी रियाल (झण्डै २३ करोड रुपियाँ) भन्दा बढिको कारोबार हुन्छ । अन्य क्षेत्रको अहिले मैले ठ्क्कै भन्न सकिन । काम गर्नेहरुको संख्या त्यही साढे चारसय जति छ ।
अनुः मैले कन्ष्ट्रक्शनदेखि अन्य सबै व्यवसायमा काम गर्छु । ब्यूटीपार्लर मैले नै हेर्छु । हरेक काममा व्याक सर्पोट मेरो छ । पहिला मैले काम पनि कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीमै गर्थें । उहाँ एकाउन्टेन्टको रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यही बेलामा हामीले पनि आफै केही काम गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो । उहाँ एकाउन्टेन्ट काम गरे पनि पेश इन्जिनियर थियो । नेपालमा काम नपाइने, पाए पनि भने जस्तो नपाइने स्थितिले उहाँ यहाँ आएर काम गर्नुभएको हो । सोही क्रममा म पनि आएँ र कामको अनुभव भएपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । सानै स्केलबाट काम गर्दागर्दै अहिले सफलता मिल्यो ।
तपाईं इन्जिनियर मान्छे । के नेपालमा काम गर्ने अवसर थिएन र यहाँ आउनुभयो ?
विकासः हामी सन् २००६ तिर कतार आएको हो । त्यति बेला नेपालको अवस्था त्यति राम्रो थिइन । अस्थिरता थियो । काम पाउने काम गर्ने बाताबरण बनिसकेको थिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि बन्द हडताल, राजनीतिक अनिश्चितता जस्तो । हामी मध्यस्तरीय मान्छे । कतारमा आएर कम्पनी चलाउने, व्यवसाय गर्ने भन्ने सोचेको पनि होइन । आएर काम गर्न थालेपछि त्यो खालको सोच बन्यो । काम गर्दै जाँदा यहाँको नियम कानुन बुझिसकेपछि केही पुँजी नेपालबाटै ल्याएर कम्पनी सुरु गरेको हो । काम गर्दै जाँदा राम्रै भयो । यहाँ काम गर्न सहज छ । नेपालमा भए धेरै खालको चुनौति र जोखिम झेल्नुपर्छ व्यवसाय गर्दा । यहाँ त्यो खालको परिस्थिति निकै कम छ ।
तपाईं एउटा महिलालाई खाडी मुलुकमा व्यवसाय गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ श्र यहाँको कानुन फरक छ । बाताबरण फरक छ । संस्कार फरक छ ।
अनुः मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लाग्थ्यो । तर जुन खालको हामीले साच्ने गर्छौं, त्यस्तो छैन यहाँ । एयरपार्टबाट आउने क्रममा कतार जाने भन्दैमा हामीलाई अप्ठ्यारो महशुस हुन्छ । म यहाँ आएर काम गर्दा एकदमै स्वतन्त्र छ । महिला भएकैले असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने वा विभेद हुने भन्ने छैन । म आफ्नै मुलुक नेपाल जाँदा बरु त्यति स्वतन्त्र महशुस हुन्न । तर यहाँ त्यस्तो छैन । महिलालाई बरु यहाँ सम्मान छ । कुनै पनि काम गर्दा कन्फिडेन्स (विश्वस्त) भएर काम गर्न सक्छौं ।
नेपालमा निर्माण कार्यले गति पनि लिन लागेको छ । सँगसँगै निर्माणको गुणस्तरमा पनि प्रश्नहरु उठने गर्छ । तपाईंले यहाँ निर्माण क्षेत्रमा जुन खालको अनुभव बटुल्नुभएको छ, यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ ?
विकासः नेपालमा समस्या भनेको निर्माणको काम गर्ने कुरामा फाइदालाई मात्रै हेर्ने । सस्तोलाई मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै पनि घर वा भवन बनाउने भन्ने कुरा लामो समयको लागि हो । निर्माणको जिम्मा लिनेबाट मापदण्डअनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्ने । समयमा पनि काम नगर्ने । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन सरकारी निकायबाट पनि नहुने अवस्था छ । घर बनाउनेको पनि त्यति ध्यान पुगेको हुँदैन । अनुभव नभए वा आर्थिक कारणले पनि हुनसक्छ । कतिपयमा यत्तिको भए चलिहाल्छ नि भन्ने सोच हुन्छ । यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरको नियमित सुपरभिजनमा काम भइरहेको हुन्छ । सुरुदेखि नै कुनै पनि कुरामा कन्जुस्याईं हुन्न ।
एक नम्बरका निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुन्छ । सरकारकै मानिसहरु पनि आएर त्यसको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । यसरी गर्ने हो भने नेपालमा पनि नराम्रो निर्माण हुँदैन । मैले पनि भोलि नेपालमै गएर काम गर्ने हो । त्यही सिलसिलामा रियल स्टेट (घरजग्गा)मा पनि लगानी गरेको छु । भोलि मैले काम गर्दा जुन मैले सिकेको छु । जानेको छु । जुन उत्तम प्रवृधि हो । त्यही अपनाउने हो । त्यही अनुभवका आधारमा मैले काठमाडौंमा समेत घरहरु बनाएको छु । ती घरमा त्यत्रो भूकम्प जाँदा कतै पनि स्क्र्याच (चर्केको) छैन । भूकम्प जाँदा म काठमाडौंमै थिएँ । स्क्र्याच नभएका घर पाउन मुस्किल थियो ।
तपाईंको अबको योजना छ भनिदिनु न । कसरी अगाडि बढने ? नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्ने सोचाई छ ?
विकासः भविश्यमै पनि म यही गति, यही उत्साहले काम गर्ने हो । कुनै पनि काममा लगनशील भएर काम गरेपछि सफलता प्रायः हुन्छ । मैले सुरु गर्न लागेको पोलिक्लिनिक पनि कतारसहित अन्य गल्फ (खाडी) कन्ट्रीमा विस्तार गर्ने सोचाई छ । नेपालमा अहिले रियलस्टेटमा लगानी छँदैछ । यसलाई विस्तार गर्ने र अर्को भनेको होटलमा लगानी गर्ने योजना छ । भैरहवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ । त्यहाँ तीन तारे स्ट्ण्डर्ड (मापदण्ड)को होटल बनाउने तयारी गरेको छु । लगानी कति हुन्छ, त्यसको डिजाइन तयार भएपछि थाहा होला । तर यो हाम्रो एकल लगानीमा हुन्छ ।
अरु क्षेत्र जस्तो जलविद्युत, पर्यटनमै पनि अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको राम्रो संभावना छ नि । ती क्षेत्रमा लगानी नगर्ने ?
विकासः जलविद्युतमा पनि गर्न सकिन्छ । तर मेरो यस क्षेत्रमा अनुभव छैन । जुन क्षेत्रमा आफूले बुझेको हुन्छ । अनुभव हुन्छ । विश्वास हुन्छ । त्यसमा लगानी गर्दा आफूलाई सहज हुन्छ । अहिले मेरो सोचाई भनेको रियलस्टेल, होटल हो । अब यो पोलिक्लिनिकमा कत्तिको सफलता पाउँछौं, त्यसको आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । त्यो पछिको कुरा हो ।
विकासः हिजो हामी कतार आउँदाको स्थिति त अहिले छैन । धेरै कुरामा सुधार हुँदै गएको छ । संविधान पनि बन्यो । नियम कानुन र सोचाईमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । स्थानीय चुनाव पनि भएपछि आर्थिक विकासले पनि गति लेला । लगानी गर्ने कुरामा जस्ले पनि सहज बाताबरण खोज्छ । हामीले आफ्नो मुलुकमा लगानी नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । क्रमसः बढाउँदै जाने हो । किनभने हाम्रो जग भनेको कतार हो । यहाँ सफल भएर, यहाँ कमाएर नेपालमा लगानी गर्ने हो । यहाँ दुःख गरेर कमाएको पुँजीलाई नेपालमा सही ठाउँमा लगानी गरौं । त्यसले सही प्रतिफल दियोस् । रोजगारी पनि सिर्जना होस । मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुगोस भन्ने हो ।
विकासः यो बाध्यता हो । यसमा चाहना कमैको मात्र हो । अधिकांशको बाध्यता हो । हुन त नेपालमै बसेर काम गर्दा पनि बिहान बेलुका खान त कसैलाई पनि समस्या नहोला । तर जिबिकोपार्जनका लागि, सहज जीवन यापनका लागि कतारको ५२ डिग्रीको गर्मीमा आएर काम गर्नुपर्ने धेरैलाई बाध्यता बनेको हो । यसमा दोष म कुनै राजनीतिक दललाई दिन्न । यो हाम्रो जुन खालको सामाजिक व्यवस्था छ । राजनीतिक स्थिति । आर्थिक प्रणाली छ । त्यसले सिर्जना गरेको समस्या हो । जबसम्म मुलुकमा पद्दतीको विकास हुन्न । आर्थिक विकासको दीर्घकालिन सोच, त्यसमा सबैको इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुँदैन, तवसम्म नेपाली दाजुभाई कतार धाउनु बाध्यता हुन्छ ।